Farmaajo iyo raiisul wasaarihiisa oo lakulmay labad aqal ee baarlamanka - Somalia Focus
by Hassan Ali | Thursday, Mar 2, 2017 | 143 views
2,March,2017(SofoNews) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan casho sharaf u sameeyey Xildhibaannada labada aqal ee Barlamaanka Federaalka Soomaaliya kaddib anisixintii Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Kulanka casho sharafta ah ee uu madaxweynaha Qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u sameeyey xildhibaannada Barlamaanka Federaalka Soomaaliya, waxa ay ka dhacdey Villa Somalia, waxaana ka soo qeyb-galay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari) Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Kheyre iyo Ra’iisul wasaare ku xigeenka Maxamed Cumar Carte.
Sidoo kale waxaa madadaallo iyo heeso ku soo bandhigay kulanka cashada Fannaaniinta hobollada Qaranka Waaberi.
Madaxweynaha, Guddoomiyaha golaha shacabka iyo Ra’iisul wasaaraha, ayaa xildhibaannada dhexgalay, si ay ugu muujiyaan mahadcelinta cashada sharafta.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre, ayaa si weyn ugu mahadceliyey Xildhibaannada Barlamaanka Federaalka Soomaaliya, waxa uuna ku taliyey in wadajir dalka loogu adeeggo, waxa uu sheegay in ay gacan ku siiyaan xildhibaannada sidii uu uga shaqeyn lahaa wax ka qabashada xaaladda abaaraha ee uu dalka ku jiro.
Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari), ayaa dhankiisa sheegay in ay wada shaqeyn doonaan madaxda Qaranka oo dhan.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa khubaddiisa ka hor si gaar ah uga mahadceliyey hobollada Fannaaniinta Waaberi oo uu mid mid u gacan qaadey.
Madaxweyne Farmaajo, ayaa sheegay in dalka uu ku hoggaaminayo nabaddoonnimo, rajada shacabkuna ay ka dhabbeyn doonaan, waxa uu intaa raaciyey in dowladdiisa ay khilaaf ka madax bannaan doonto.
Xildhibaannada golaha shacabka oo gutay waajibaadkooda Destuuriga, ayaa anisixyey Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, iyadoo dhowaan la sugayo Xukuumadda uu soo dhisi doono Ra’iisul wasaaraha si dalka looga saaro marxaladaha adag ee uu ku jiro.